Myanmar Bookmarklet by Saturngod
Credit : http://www.saturngod.net/knowledgebase/myanmar-bookmarklet
Font install သွင်းမရတဲ့ စက်တွေမှာ မြန်မာစာ ဖတ်လို့မရဘူး။ နောက်ပြီး ဇော်ဂျီပဲ သွင်းထားတယ်။ unicode မသွင်းချင်ဘူး။ unicode ပဲ သွင်းထားတယ် ဇော်ဂျီမသွင်းချင်ဘူးဆိုတဲ့ စက်တွေအတွက် bookmarklet လုပ်ထားတယ်။ ဒီမှာ (http://dl.dropbox.com/u/283860/host/bookmarklet/index.html) သွားပြီး ယူနိုင်ပါတယ်။ Link ကို click မနှိပ်ပဲ Drag & Drop Bookmarkbar ပေါ်မှာ ဆွဲထည့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် ကြည့်ချင်တဲ့ site ကို bookmark bar ပေါ်က bookmark လေးကို နှိပ်ပြီး လွယ်လင့်တကူ ကြည့်လို့ရပါတယ်။
လက်ရှိ Bookmarklet တွေကတော့
Unicode To Zawgyi
Unicode MM3 (Myanmar3)
Masterpiece Uni Sans ကော Myanmar3ကောက iOS မှာ အလုပ်မလုပ်သလို Mac မှာလည်း Safari မှာပဲ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Windows မှာတော့ မစမ်းရသေးပါ။
အခုတော့ Unicode font မရှိလည်း ကျွန်တော့် အတွက်မပူရတော့ဘူး။ unicode font ကိုလည်း သီးသန့် သွင်းထားနေစရာမလိုတော့ဘူး။ ကြည့်ချင်တဲ့ site ကို လွယ်လင့်တကူ ကြည့်လို့ရသွားပါပြီ။
Posted by P Kyaw Swa at 7:20 PM
မိမိနက္၀က္ကုိခ်ိတ္ဆက္လာေသာ Device မ်ားႏွင့္ Ip ကုိသိရွိနုိင္ရန္..
PortScan shows all open ports and additional information like host name, MAC address, HTTP, SMB, FTP, iSCSI, SMTP and SNMP services. It uses up to 100 threads for scanning large IP addresses. You can search for UPnP enabled devices, Bonjour services, Netgear router, Samsung printer and Freecom network devices. So you can find them even if you don’t know the ip address.
Posted by P Kyaw Swa at 6:42 AM
မိမိနက္၀က္ကုိခ်ိတ္ဆက္လာေသာ Device မ်ားႏွင့္ Ip ကုိ...
Animated Christmas Tree မ်ားနဲ႔သင့္ရဲ႕ Desktop ကုိ...
Ubuntu OS အား Unetbootin ကုိသုံးျပီး Bootable USB ...
HTML5စာအုပ္ (Ebook)
Youtube,Facebook တုိ႔မွ Download ခ်ရန္ အဆင္ေျပတဲ႔ IDM 6.07